SomaliTalk.com » 2014 » October » 13
Home » Archive Maalinta October 13th, 2014
Ninkii jecel Ilaahay iyo rasuulkiisa, diinta islaamkana rumaysan oo qadarinaya waa walaalkay igu leh xuquuqda walaalnimada xataa haddii uu i nicibyahay ama i colaadiyo ama uu nicibyahay kooxdayda ama tolkay ama deegaankayga, waxaana u arkayaa inuu yahay walaalkay igu gafay oo u baahan in gafka iyo qaladka laga saxo sida dambiyada iyo gafafka kale looga saxayo. Laakiin waxaa cadow ii ah ninkii la collooba...
Somali Government strongly condemns the attack of journalist in Mogadishu
Mogadishu, 12 October 2014 – H.E. Mustafa Duhulow, Minister of Information today strongly condemned the attempted assassination of Abdirizak Jama (Black), the Director of Somali Channel TV in Mogadishu office. The Minister of Information said “Today’s attack and the attempted assassination of Abdirizak Jama (Black) is a barbaric and heinous attack amid to silence journalists in Somalia by terrorists...
Halkudheg: wariye black
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli oo Canbaareeyey Qaraxa ka dhacay Magaalada Muqdisho
Warsaxaafadeed ka soo baxay xukuumadda FS: Garoowe, 12, October, 2014……. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa si kulul u canbaareeyey weerarka argagaxiso ee lagu bartilmaameedsaday dad rayid ahaa oo ku sugnaa maqaaxi laga cunteeyo oo ku taalla waddada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho. Ra’iisul Wasaaraha ayaa weerarkan ku tilmaamay...